सुन प्रकरणका नाइके गोरेकी पत्नीसँग महान्यायाधिक्ताको के साइनो ? | Rajmarga
सुन प्रकरणका नाइके गोरेकी पत्नीसँग महान्यायाधिक्ताको के साइनो ?
काठमाडौँ । नेपाल सरकारकै बहालवाला महान्यायाधिवक्ताले फरार अभियुक्तसँग तस्बीर खिचेको पाइएको छ ।
बहुचर्चित साढे ३३ किलो सुन प्रकरणका मुख्य नाइके गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीकी पत्नी निरु खरेल (नर्वदा) ले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँगै रहेर खिचेको तस्बीर फेशबुकमा पोष्ट गरेकी छिन् । मुख्य अभियुक्त उप्रेतीकी पत्नी निरुलाई पनि प्रहरीले अभियुुक्त सूचिमा राखेको छ ।
उनी पनि फरारको सूचिमा छिन् । पूर्व कानूनमन्त्रीसमेत रहेका महान्यायाधिवक्ता खरेलको घर र गोरेकी पत्नीको माइती घर झापा हुनु संयोग मात्र भएपनि निरुको माइती थर खरेल नै रहेकाले उनीहरुबीच नाता सम्बन्ध हुन सक्ने अड्कलबाजी गरिएको छ ।
मोरङको उर्लाबारीमा स्थायी घर भई हाल उनी काठमाडौंको गौरीघाटमा गोरेले किनेको घरमा बस्दै आएकी थिइन् । गोरेकी पत्नी नीरुको माइतीघर झापाको कमलगाउँपलिका–६ मा पर्छ । महान्यायाधिवक्ता खरेल भने गौरादह–महारानीझोडाका हुन् ।
भीआईपीहरुसँग सर्वसाधारणले फोटो खिच्नुलाई अनौठो नमानिएपनि महान्यायाधिक्ता खरेल र निरुको तस्बीर सामान्य परिघटना मात्र नहुने लख काट्न सकिन्छ । फोटो कहिले खिचिएको खुल्न सकेको छैन । यद्यपि शक्तिशाली ब्यक्तिको पँहुचमा रहेको जनाउ दिन सो तस्बीर फेसबुकमा पोष्ट गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहिरहेकी निरुले फेसबुक अझैसम्म ‘डिएक्टीभ’ गरेकी छैनन् । उनले केही दिन अघिमात्र महान्यायाधिवक्ता खरेलसँगै खिचेको तस्बीर पोष्ट गरेकी हुन् । सो तस्बीर पोष्ट भएसँगै कानून कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महान्यायाधिवक्ता खरेल पनि संदेहको घेरामा तानिएका छन् ।
Previous post: साउनदेखि न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूति गरिने : श्रममन्त्री
Next post: संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन आइतबार